TIGERNU, Ihe ọhụụ ọhụụ, zipa dị larịị
Onye nwe TIGERNU, MR .Qian, na-etinye uche mgbe niile na ihe ọhụrụ nke zipa, n'ihi na mkpọchi akpa bụ akụkụ kachasị mkpa nke otu akpa. Anyị bụ ndị mbụ emeputa kwuru mgbochi ohi echiche na China, n'ihi na laptọọpụ backpacks, e wezụga ndị nkịtị nchebe si Nchikota ...
site ha na 20-05-15
TIGERNU nyere akpa na ụlọ ọgwụ dị n'ógbè ahụ na Nbọchị Nọọsụ Mba Nile, ụbọchị iri na abụọ nke Mee, anyị ji obi ekele niile maka ndị dọkịta na ndị nọọsụ na-agba mbọ imecha ọrụ nchekwa COVID-19 na Wuhan .nke nwere ọnọdụ siri ike. Mgbe anyị na-ekwu maka ọrụ nke otu ụlọ ọrụ, zaghachi ...
Gịnị mere n’oge pụrụ iche?
TIGERNU bu ubochi ama ama na China, ma buru onye mbu na China iweputa echiche mgbochi akpa. Ebe ọ bụ na ntiwapụ nke coronavirus, anyị emeela ihe ndị dị irè iji kwado nkwa ngwa ngwa maka isi ahịa anyị .N'oge ugbu a, ikike mmepụta nwere ...
TIGERNU malitere ọrụ na nso nso a, ma mejuputa ihe ndị Ngalaba Mgbochi Mgbochi Ngalaba na Guangzhou rụzuru, wee rụọ nchọpụta ọnọdụ okpomọkụ, idebe ihe ọcha na disinfection, wee laghachi ndebanye aha maka ndị ọrụ arụzigharị. Mpempe akwụkwọ nke Coronavirus mgbochi m ...
TIGERNU bu oru diri ndi oru na ndi na ere ahia, ha na enye nsogbu n’ebe oru no na agha Corona .Na oru abuo n’ụlọ.
TIGERNU bu oru diri ndi oru na ndi na ere ahia, ha na enye nsogbu n’ebe oru no na agha Corona .Na oru abuo n’ụlọ. Iji dozie nsogbu ọrụ tupu anyị amalite ịrụ ọrụ n'ọfịs, TIGERNU kpebiri ịgwa nduzi kachasị ọhụrụ nke Nje Virus site na gọọmentị mpaghara, beca ...